DAAWO: 3 Qof Oo lagu dilay Iska hor imaad ka Dhacay Zimbabwe Iyo ku Shubasho Codadkii Doorashada | Afrikada
DAAWO: 3 Qof Oo lagu dilay Iska hor imaad ka Dhacay Zimbabwe Iyo ku Shubasho Codadkii Doorashada
Aug 2, 2018 - Dhiibo Aragtidaada
Afrikada, Harare: Wadanka Zimbabwe waxaa ka bilowday rabshado. 3 qof ayaa lagu dilay rabshadahaasi oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Harare.
Wararku waxa ay sheegayaan ciidammada booliska dalkaasi ay fooda isdareen taageerayaasha mucaaradka dalkaasi, sdia ay ku soo waramayaan goobjoogayaashu.
Galabnimadii Arbacada ayaa waxaa faras magaalaha Harare ay isku bedeshay goob dagaal iyadoo la kiciyey diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasi oo dul heehaabayey magaalada, waxaa sidoo kale isgoysyada waaweyn la dhigay gawaarida gaashaaman ee ciidammada.
Ciidammada milleteriga dalkaasi ayaa lagu soo daabulay caasimadda Harare halkaasi oo boolisku tabar dhigeen kadib markii dadweynuhu ay iska horyimaadeen.
Daabulitaanka ciidammada iyo garaacista dadweynaha oo boolisku uleeyay ayaa waxaa la sheegay in ay dib u dhacyo waaweyn ku tahay madaxweynaha talada wadankaasi haya ee Emmerson Mnangagwa kaasi oo dadaalkiisii uu dalka ku badbaadinayey uu noqday ‘Hal bacaad lagu lisay’
Intii aaney dhibaatooyinku dhicin ayaa waxaa goobjoogeyaasha doorashooyinka ee ka socday wadammada Yurub ay su’aal ka keeneen sida ay u dheceen doorashooyinkii madaxweynanimo iyo kuwa baarlamaanka, waana markii ugu horeysay ee arrintani ay dhacdo 40 sano oo talada dalkaasi gacanta ku hayey madaxweynihii hore Robert Mugabe.
Rabshadaha ayaa waxaa ay bilowdeen wax yar kadib markii hogaamiyaha ururka mucaaradka ee Dhaqdhaqaaqa Isbedelka Dimuqraadiga ee MDC Nelson Chamisa uu isagu sheegtay in uu isagu ku guuleystay codadka inta badan doorashadii dalkaasi ka dhacday.
Waxaana intaa kadib banaanada u soo firxaday kooxo ka mid ah taageerayaashiisa kuwaasi oo wadooyinki ku gubay taayerro kadibna weeraro ku harqiyey saldhigyada ciidamada booliska ee k dhow xarunta doorashooyinka dalkaasi halkaasi oo saraakiisha boolisku ku jawaabeen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaas.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Antonio Guterres ayaa ugu baaqay hogaamiyeyaasha siyaasadda Zimbabwe iyo shacabka in ay dulqaad isku muujiyaan isla markaasina ay diidaan wax waliba oo mashaakil rabshado keeni kara.
Wasiirka cadaaladda dalkaasi Zimbabwe Ziyambi Ziyambi, ayaa sheegay in ciidamada milleteriga loo daabulay magaalada Harare si ay u kala ceyriyaan raxanta dadweynaha isla markaasina dib loo soo celiyo “Nabadii iyo Xasilloonidii.”
“Joogitaanka ciidammadu ma aha in la handadayo dadka ee waa in la abuurayo jawi lagu xaqiijinayo sharciga iyo kala dambeynta. Waxaana ciidammadu ay halkaan u joogaan in ay caawiyaan booliska, ” ayaa uu sheegay wasiir Ziyambi oo wareysi siinayey telefishinka ee eNCA.
Madaxda dalkaasi ayaa waxaa ay dareemayaan culeys siyaasadeed iyo cadaadis isa soo taraya kaasi oo ka imanaya shaacinta natiijada doorashooyinka waxaana ay natiijada iska horkeenaysaa hogaamiyaha da’da yar ee 40 jirka ah Nelson Chamisa, ahna looyer, hogaamiye mucaarad ee ururka ugu weyn dalkaasi ee Dhaqdhaqaaqa isbedeldoonka dimuqraadiyadda isaga oo ka soo horjeeda madaxweynihii ku meel gaarka ahaa ee Emmerson Mnangagwa, ahna 75, la taliye u ahaan jirey madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe ahna madaxa guud ee xisbiga talada haya ee Zanu-PF.
Si kastaba, iyadoo beesha caalamku aysan soo fara gelin ansixinta doorashooyinka iyo cida noqoneysa madaxweyne ayaa waxaa hogaamiyaha madaxweynaha ka noqon doona Zimbabwe horyaalla howl adag oo la doonayo in uu irdaha u furo balaayiin doolar oo caalamku diyaar ula yahay Zimbabwe in lagu maalgeliyo si loogu soo dhiso dhaqaalihii mugdiga galay ee dalkaasi uu waayo hore ku faani jirey.
Goobjoogayaasha dusha ka eegaya doorashooyinka ayaa walaac ka muujiyey dib u dhaca ku yimid shaacinta natiijooyinka doorashooyinka madaxweynanimo, iyadoo labada dhinac ee tartanku ka dhexeeyao ee Chamisa iyo Mnangagwa ay si aad ah isku qabteen.
Qaar badan oo banaanbaxayaasha ka mid ah ayaa ku eedeeyay ciidammada in ay si waxashnimo ah dadka u handadeen.
“Ma aanaan heysanin hub, maxaa ay ciidammadu halkani noogu yimaadeen oo ay noo garaacayaan? noo tooganayaan? Tani ma ahan doorasho, waa ceebayn wadankeenna u soo hoyatay,” ayaa uu yiri mid ka mid ah dhallinyarada oo lagu magacaabo Colbert Mugwenhi.
Marqaati u waramay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in uu arkayey ciidammada oo ulo waaweyn ku garaacaya dadka dhulkana dhigay 2 qof halka dad gaaraya 5 qof la saaray gaari ciidammo ka buuxaan.
Gudiga doorashooyinka ayaa sheegay in laga dhursugayay in natiijada doorashada madaxweynanimo la shaaciyo abaarihii 10.30 GMT laakiin taasi dib ayaa loo dhigay muddo 24 saacadood ah.
Iyadoo ay jireen 3 kursi oo weli la doonayey in ay u codeeyaan dhanka doorashadii baarlamaanka, waxaa xisbiga ZANU-PF uu ka helay halkaasi 144 kursi marka loo barbardhigo 61 kursi oo ay heleen mucaaradka MDC, tani oo macnaheedu yahay in xisbiga talada haya ay ku guuleysteen 3 meelood labo meel aqlabiyadda baarlamaanka taasi oo weliba awood u siinaysa in ay markaasi bedeli karayaan dastuurka dalka, haddiiba ay doonaan.
Hogaamiyaha mucaaradka Chamisa ayaa sheegay in natiijada baarlamaanka ee markiiba ay xisbiga talada haya ay ku dhawaaqeen ay aheyd shirqool lagu diyaarinayey in shacabka Zimbabwey lagu indho xiro loona sheego in uu guusha helay madaxweyne Mnangagwa, oo horey u ahaa hogaankii hey’adda sirdoonka qaranka kuna magac dheeraa ‘Abuu Yaxaas’ oo badankood ay dhar caddu ugu yeeri jireen.
“Danaha Istraatiijiyadeed ayaa macnaheedu waxa uu yahay in la diyaaro qaab maskaxda looga qabsanayo rayidka Zimbabwe si ay u aqbalaan natiijo doorasho ‘Been-abuur ah’. Waxaasi ma jiraan, annaga ayaa helnay inta badan codadka ay sheeganayaan. Annaga ayaa ku guuleysanay codeyntii waana difaacaneynaa codadkaasi,” sidaasi waxaa bartiisa twitterka ku yiri hormuudka mucaaradka Mr. Nelson Chamisa.